Nepal Deep | नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलन बाहिरबाट निर्देशित छ: योगेश भट्टराई
काठमाडौँ। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलन बाहिरबाट निर्देशित भएको खुलाएका छन्। भट्टराईले बहस छोडेर आन्दोलन गर्न सडकमा ओर्लिने बेला बारले कुनै राजनीतिक दलसँग सल्लाह नगरेको भन्दै अहिले उनीहरुलाई अप्ठ्यारो पर्यो भन्दैमा प्रधानन्यायधीशलाई महाभियोग लगाउन नसकिने स्पष्ट पारेका हुन्।
भट्टराईले भने, ‘यो आन्दोलन जुन गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा कुनै सल्लाह गर्नु भएको छ र? एमालेसँग, कांग्रेससँग सल्लाह गर्नु भयो?अहिले आफूहरुलाई अप्ठ्यारो पर्यो भनेर ज्ञापन पत्र बुझाउँदै हिड्नु भएको छ। बारलाई अप्ठ्यारो पर्यो भनेर जता सुकै हामफाल्ने? बारको अध्यक्ष लाई अप्ठ्यारो पर्यो भनेर के.पी. ओली ले हामफाल्ने? शेर बहादुर देउबाजीले हामफाल्ने?’
भट्टराईले महाभियोग भन्ने कुरा खेलाची नभएको पनि बताए। उनले महाभियोग असामान्य समयमा मात्र प्रयोग हुने भन्दै अहिले त्यस्तो समय नआएको बताए। उनले भने, ‘उहाँहरु कुन उद्देश्यले सडकमा आउनु भएको थियो? कुन उद्देश्यले निर्देशित हुनु भएको थियो? प्रधान न्यायधीश-न्यायधीशलाई महाभियोग लगाउने भन्ने कुरा सामान्य कुरा होइन। यो असामान्य समयमा मात्र हुन्छ।’
भट्टराईले अखबारी हल्लाकै पछाडी लागेर महाभियोग लगाउनु जायज नभएको बताए। उनले प्रधानन्यायधीश माथि लागेका आरोपहरु प्रमाणित गर्न पनि चुनौती दिए। उनले भने, ‘प्रमाणित गरेर ल्याए छुट्टै कुरा हो। तर यो न्यायधीश मन परेन यो प्रधानन्यायधीश मन परेन भन्दैमा महाभियोग लगाइदिइ हालौं न भन्ने हुँदैन। यो सामान्य कुरा होइन।’
भट्टराईले हल्लाकै कुरा गर्ने भए प्रधानन्यायधीश राणालाई कांग्रेसको मान्छे भनेर प्रचार गरिएको तर अहिले कांग्रेसकै सरकार हुँदा किन उनलाई निकाल्ने षड्यन्त्र भइरहेछ भन्दै पनि प्रश्न गरेका छन्। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चोलेन्द्र शमशेर राणालाई सिफारिस गर्नु भयो। कांग्रेसको मान्छे भन्थे उहाँलाई त्यतिबेला। कांग्रेसकै मान्छे भएको भए आज कांग्रेसकै सरकार हुँदा ज्यादती भइरहेको छ?’